N'oge na-adịbeghị anya: Mepụta na-akpaghị aka, Na-ebuli ma Na-ekekọrịta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi N'iji AI na Ọdịnaya dị
Nnukwu usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-amalite site na ọdịnaya dị mkpirikpi nke ị nwere ike ịfefe na ọwa gị niile ma mee ka onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ gị kọwaa. Mfe ime otu ugboro, ugboro abụọ, ọbụna ugboro atọ. Ma ọtụtụ narị na ọtụtụ puku ugboro? Nke ahụ bụ ebe ọgụgụ isi mmadụ na-eme n'oge na-adịbeghị anya na-enye gị mmụba site na ịtụgharị ọdịnaya ọ bụla nke longform n'ime ìgwè mgbasa ozi mgbasa ozi iji bulie mmemme mgbasa ozi gị. N'oge na-adịbeghị anya Artificial Social Intelligence Platform gụnyere AI Afọ